Audi သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း အသစ် တစ်ခုတည်ဆောက် မည် - Pandaily
Audi သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း အသစ် တစ်ခုတည်ဆောက် မည်
Jun 24, 2022, 11:18မနက် 2022/06/24 14:16:10 Pandaily
Audi FAW နယူး စွမ်းအင် ယာဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် တည်ဆောက် ခြင်း။ဇွန် လကုန် ပိုင်းတွင် Jilin ပြည်နယ် Changchun တွင်စတင် မည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ Audi ၏လျှပ်စစ် မဟာဗျူဟာ ၏အဓိက မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်လာ ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Audi သည် စီမံကိန်းတွင် ယူရို ၂. ၆ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂. ၇ ဘီလီယံ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ အသစ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း အသစ် တည်ထောင် ခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ Audi FAW New Energy Vehicle Co., Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပထမဆုံး ဖက်စပ် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး Audi မှ အစုရှယ်ယာ အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်သည်။ တရုတ် ဈေးကွက် အတွက် တည်ဆောက် ထားသည့် Premium Platform Electric (PPE) ကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း သစ် သည် နှစ်စဉ် မော်တော်ယာဉ် ၁၅၀, ၀၀၀ ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ၂၀ ၂၄ ခုနှစ်အကုန်တွင် ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Audi Neckarsulm စက်ရုံ ၏ မန်နေဂျာ ဟောင်း Helmut Stettner သည် ကုမ္ပဏီ အသစ် ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သည်။ သူ သည်တရုတ် စျေးကွက် တွင် အတွေ့အကြုံ များစွာ ရှိပြီး ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၅ အထိ FAW-Volkswagen Changchun အခြေစိုက် စက်ရုံ နှင့် ထုတ်လုပ်မှု မန်နေဂျာ အဖြစ် လုပ် ကို င်ခဲ့သည်။ “တရုတ် ဟာ Audi ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး တစ်ခုတည်း ဈေးကွက် ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ် ကား ကဏ္ဍ မှာ ခိုင်မာတဲ့ တိုးတက်မှု အရှိန် အဟု န်ကို ပြသ နေပါတယ်၊ ဒီ အသစ်စက်စက် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ကိုတည်ဆောက် ခြင်းအားဖြင့် Audi ဟာ တရုတ် မှာ သူ့ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် အရေး ပါတဲ့ ခြေလှမ်း တစ်ခု လှမ်း နေပါ တယ်” လို့ သူ ကပြောပါတယ်။
Audi မှ ၂၀၃၀ တွင် တရုတ်၏ အဆင့်မြင့် ကား ဈေးကွက် သည် ၅. ၈ သန်းအထိ တိုးတက်လာ မည်ဖြစ်ပြီး ၃. ၁ သန်း မှာ လျှပ်စစ် ကားများ ဖြစ်လာ လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ် ကား ရောင်းအား သည် သမားရိုးကျ လောင်စာဆီ ယာဉ် များ ထက်သာလွန် မည်ဟု ဆိုလိုသည်။
၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ လမှ စ၍ Audi သည်၎င်း၏ “e-tron” မော်ဒယ်ကို FAW-Volkswagen Changchun အခြေစိုက် စခန်းတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခု Audi သည် လျှပ်စစ် ကားများ ထုတ်လုပ်ရန် အထူးပြု သည့် တရုတ်နိုင်ငံ တွင်ပထမ ဆုံးသော စက်ရုံ ရှိလိမ့်မည်။ အစီအစဉ် အရ Audi A6 e-tron နှင့် Audi Q6 e-tron စီးရီး ရှိ မော်ဒယ် သုံး မျိုးကို အခြေစိုက်စခန်း အသစ် တွင်စတင် ထုတ်လုပ် မည်ဖြစ်သည်။ “နောက်ဆုံး မှာ လူ ၃၀၀၀ လောက် အခြေစိုက်စခန်း အသစ် ထဲကို ၀ င် လာ လိမ့်မယ်” ဟု Stetner ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Audi သည် NIO အား ကား အမည် ချိုးဖောက် မှုဖြင့် တရားစွဲ သည်
Audi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Markus Duesmann က ၂၀ ၂၆ ခုနှစ်မှစ၍ လျှပ်စစ် ကား များကိုသာ ဈေးကွက် သို့ မိတ်ဆက် ရန်စီစဉ် နေကြောင်း Wirtschaftswoche သို့ ကြာသပတေး နေ့က ထုတ်ဝေသော အင်တာဗျူး တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များသည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် အခွန် မက်လုံး များ ၏အနာဂတ် ကိုဆုံးဖြတ် သည်
တရုတ် စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဒုတိယ ၀ န်ကြီး ကဒီ နှစ်ကုန် မှာ ရပ်တန့် ဖို့ စီစဉ် ထားတဲ့ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် တွေအတွက် ဦး စားပေး အခွန် မူဝါဒ ကိုဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် သင့် မသင့် ကို အမြန်ဆုံး လေ့လာ မယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲမှာ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
EVCIPA အဖွဲ့ဝင် များက အောက်တိုဘာလတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ အများပြည်သူ အားသွင်း နိုင်သည့် တိုင် ပေါင်း ၁. ၀ ၆၂ သန်း ရှိကြောင်း အစီရင်ခံ ခဲ့သည်
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Board (EVCIPA) သည် အောက်တိုဘာလတွင် အမျိုးသား အားသွင်း ပုံ လည်ပတ်မှု အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
News Nov 11 နိုဝင်ဘာ 12, 2021